လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထမှု - လိင်စိတ်ပူပန်မှုလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လိင်အပျော်အပါးများလှုံ့ဆော်မှုများအတွင်းနှိုးဆော်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း (1987) - Your Brain On Porn
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 1987 Aug;16(4):311-9.
Beggs ့, Calhoun KS, Wolchik လုပ် SA.
ဟားဗတ်လူထုကျန်းမာရေးအစီအစဉ်, Braintree, မက်ဆာချူးဆက် 02184 ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်လှုံ့ဆော်မှုကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်လိင်စိတ်နိုးထ 19 လိင်အလုပ်လုပ်တဲ့အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးလှုံ့ဆော်မှုကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်လိင်စိတ်နိုးထနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ လှုံ့ဆော်မှုတစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်ကပေးတဲ့ဖော်ပြချက်အပေါ်အခြေခံပြီးဇာတ်လမ်းများ individualized ခဲ့ကြသည်။ လိင်စိတ်နိုးထတဲ့ Vaginal photoplethysmograph နှင့်အတူအင်္ဂါဇာတ်သွေးစီးဆင်းမှုစောင့်ကြည့်တိုင်းတာခဲ့သည်။ ရလဒ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးနှစ်ဦးစလုံးမှတုန့်ပြန်အင်္ဂါဇာတ်သွေးစီးဆင်းမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးပြသခဲ့သည်။ သို့သော်အပျော်အပါးအခြေအနေတိုးအဆိုပါစိုးရိမ်ပူပန်မှုအခြေအနေများထက်သိသိသာသာ သာ. ကွီးမွတျခဲ့သညျ။ အချိန်ဖြတ်ပြီးသွေးစီးဆင်းမှု၏ analysis အပျော်အပါးအခွအေနေနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအခြေအနေထိုကဲ့သို့သောလမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုမရှိခြင်းအတွက်သိသာထင်ရှားသော linear တိုးမြှင့်လမ်းကြောင်းသစ်ပြသခဲ့သည်။